Ngaphambi kokuba Uthenge Izipho Kwabahlobo Bakho Abangokomoya
Tips Tips Shopping
Indlela efanelekileyo yokukhetha isipho esipheleleyo kukuvumela intliziyo yakho ukuba ithengise. Iintengiso zentliziyo zifuna ukuba uvumeleke ukuba uhambe naluphi na uluvo lokuba UYAZI ukuba umntu ufuna ntoni okanye ufuna. Yenza intliziyo yakho ikukhokele kwisipho esifanelekileyo. Ukwenza oku kufana nokuthatha i-tummy yakho elambile kwimarike, inqwelo izalise ngokukhawuleza. Gxininisa ngokufutshane kumntu ofuna isipho. Vula intliziyo yakho, khangela ukhokelo lwangaphakathi, kwaye uya kutsalwa kwizinto ezilungileyo.
Izipho zokuPhepha nokuPhilisa
Into yokugqibela ofuna ukuyenza ilinde kude kube ngumzuzu wokugqibela kwaye ugqibe ukuthenga isipho esingafanelanga le ntlawulo. Ukunika isipho esibusayo kubonakala ngokukhawuleza kuba kubonisa ukuba ubeka ingcinga kunye nokunyamekela ekukhethweni into eyovuyisa kunye nemihlali. Isipho sokuzichukumisa sishukumisela bobabini isipho kunye nommkeli ukuba bahlanganyele inxalenye yabo yothando.
Abagcini bezinto zokuThengisa ngokomoya
Izipho zokuphilisa ngaphantsi kwe-$ 50
Izipho zokuphilisa ngaphantsi kwe-$ 100
Iingcinga ezingaphezulu zezipho
Amakristali kunye neGemstones
Ukukhetha i-crystal ingaba isipho esifanelekileyo. Kukho iincwadi ezinikezela intsingiselo yamatye ahlukeneyo anokuncedisa ukukhokelela kwi-crystal eya kukunceda ukuphulukiswa kweemeko ezithile / imiba ethile. Thatha amatye amaninzi ngelixa ucinga ngomntu engqondweni yakho, mhlawumbi ilitye liya kukuxelela ukuba nguyena!
I-A kwiiMpawu zamatye
Ukuphilisa / Iincwadi Zomoya
Xa ukhetha umntu ukuba ugcine engqondweni ukuba umntu ungumhlobo weebhugi okanye uhlobo lolayibrari.
Iincwadi zeencwadi zidla iincwadi, iilayibrari ziphendukela kubo ukuze ziboniswe. Ukuqwalasela inqaku lemibuzo efana ne-yoga, iReiki, ukulima iifuno, okanye nayiphi na into? I-novice okanye umqali oza kuqala uya kufuna iziqhelo ezisisiseko, ngelixa umfundi okhutheleyo uya kufuna into ecebileyo / yokutya kwisicatshulwa.
Umoya / Ubuhle Iincwadi zeBantwana
IziNyango zoMhlaza / iiOyile eziPhambili
Qaphela, ukhethe imifuno kwabanye njengemifuno ayisoloko ihambelana namayeza achazwe oogqirha. Amakhandlela e-Aromatherapy, izilwanyana ezinobumba ezicocekileyo zizinto ezintle zokunethezeka xa ummkeli engacelanga.
Top Holistic Health Kit Essentials
Ukukhetha izixhobo zokuphulukisa, izibilini zokomoya, njl. Hamba ngeentsingiselo zakho (imibala, imiyalezo, izandi) kwaye ujonge ukuthenga! Uyakufumana into ethile ngokwakho.
Uphilisa izixhobo / iiGadi
Izixhobo zokuThuzisa ii-Massage
IiCassettes / iiCD / iiVidiyo
Ingaba umntu ofuna isipho sokubona okanye ukulalelwayo? Ukwazi oku kuphela kuya kukunceda kwisigqibo sakho nokuba uthenge isipho esibonelelayo okanye isandi .
IiDVD - iiNgelosi kwiimifanekiso
IiReiki Music CDs
Ukuqondisisa Ukufunda - Icandelo loKhenketho: Iinkonzo
IJografi, iiMpawu zeSizwe kunye neenyaniso malunga neTexas
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Fare" ngesiTaliyane
Njani i-Tall ifanele i-Snowboard yami?
Yiyiphi Intaba yeentaba?
UBernard Hopkins - Ibhokisi e-Two Weight Classes
I-Jump isebenza kwiVolleyball